I-Perlon ye-aquarium, into ebalulekileyo kwi-aquarium yakho. | Ngeentlanzi
I-perlon ye-aquarium yinto onokuyisebenzisa njengecebo lokucoca ulwelo, Ngezibonelelo ezininzi, kwaye oko kunokuba luncedo olukhulu ekugcineni amanzi kwi-aquarium yakho icocekile nokuba uyingcali okanye ukuba usandula ukwamkela iminerals yakho yokuqala.
Kweli nqaku siza kuthetha ngalo yintoni le nto inomdla, ziluncedo kangakanani, isetyenziswa njani, kufuneka itshintshwe kangaphi… Nokunye okuninzi. Hlanganisa eli nqaku nelinye Iifilitha zangaphandle ze-aquarium ukwazisa kwihlabathi elinomdla lokucoca ulwandle!
1 Yintoni i-perlon
2 Izibonelelo zegreyhound kwi-aquarium
3 Uyifaka njani i-perlon kwisihluzi
4 Kukangaphi ndifanele nditshintshe isihluzi se-perlon?
5 Ngaba igreyhound inokuhlanjwa kwi-aquarium?
6 Ngaba kungcono i-perlon okanye isiponji?
7 Kwaye perlon okanye umqhaphu?
8 Isiphelo: sebenzisa i-greyhound kwi-aquarium, ewe okanye hayi?
9 Apho ukuthenga perlon zitshiphu
Umgangatho weJBL Symec Mat ...
Zolux - Perlon ye ...
Indawo engwevu yile i-fiber eyenziweyo, efana kakhulu nekotoni, esetyenziselwa ukuyisebenzisa ngenxa yamandla ayo okucoca ngokungaqhelekanga. Nangona inokusetyenziselwa zonke iintlobo zeefilitha, ukusetyenziswa kwayo kuyathandwa njengesihluzi se-aquarium.
Ilaphu le-perlon, njengoko besitshilo, liyinto yokwenziwa, ngayo kufuneka wenze unyango ukuze ufumane ubume kunye neepropathi ezenza ukuba zifane nomqhaphu. Yenziwe kwimicu yenylon eyahlukeneyo (eyolukiweyo, eyomzi mveliso kunye nefayibha yokutya). Ihlala ithengiswa ngeephakeji (kakhulu njengeepakeji zomqhaphu kwiikiti zoncedo lokuqala), nangona kwezinye iindawo ungasifumana ngobuninzi.
Izibonelelo zegreyhound kwi-aquarium
Inja ye-aquarium ine Zininzi izibonelelo zokugcina i-aquarium yakho icocekile nentlanzi yakho eyonwabileyo. Njengokuba:
Yiyo Izinto ezinamathele kakhulu, ehambelana ngokupheleleyo neemfuno zakho (nangona ulumke ungayoluli kakhulu okanye iya kuphulukana neempawu zayo zokucoca)
Ukhathalela Hluza amasuntswana amancinci enokubalekela kwezinye iinkqubo zokucoca ulwelo.
Indawo ihlala ixesha elide kwaye ayifuni kulondolozwa rhoqo.
Musa ukuthoba isidima ayizikhuphi neentsinga (njengoko kusenzeka ngamanye amalaphu ezinto eziphilayo).
Iyacoca ngendlela elula kakhulu.
Es ixabiso eliphantsi kakhulu.
Uyifaka njani i-perlon kwisihluzi
I-perlon ayisetyenziselwa ukuba ibe yintonga eyomileyo kwisihluzi yiyo ke loo nto, kodwa ihlala ihamba nenye into, isiponji esine-foamex, esinoxanduva lokuhluza amasuntswana angqindilili.
Into ebaluleke kakhulu kukuba, xa unyusa i-filtrate, qala ubeke isiponji se-foamex. Le nto yeyokuqala ekufuneka idlule emanzini amdaka avela kwi-aquarium, kuba, ukuba ibinyuswe ngenye indlela, onke amasuntswana angazama ukudlula kwi-perlon kwangaxeshanye, eya "kuyivala" kwaye ibangele ukuba amanzi angabambi.ukuvuza, okungaphezulu, okunokuthi kuguqule indawo yokuhlala kwentlanzi yakho.
Shwa nkathelo: HLALA ubeka isiponji se-foamex ngaphambi kwepheron.
Kukangaphi ndifanele nditshintshe isihluzi se-perlon?
Kubonakala ngathi akukho mvumelwano ininzi xa usenza isigqibo sokuba uza kuyitshintsha nini isihluzi se-perlon. Ezinye iingcali ziyaqinisekisa ukuba kufuneka itshintshwe rhoqo emva kweeveki ezimbini, abanye bathi ukuhlamba kwanele ... nangona kunjalo Kubonakala ngathi eyona nto iqhelekileyo kukuyihlamba (apha ngezantsi siza kukuxelela) njani de ibe isiwohloka kwaye iyeke ukuhluza kakuhle, ewe ewe iya kuba lixesha lokubeka isiqwenga se-perlon entsha kwi-aquarium yakho.
Maxesha amaninzi Olu tshintsho luya kuxhomekeka kwi-aquarium yakho, usicoca kangaphi esinye isiponji kunye nokhathalelo onalo ngegreyhound: utshintsho lunokuba ukusuka kwiiveki ezimbalwa, ukuya kwiinyanga ukuya kunyaka.
Ngaba igreyhound inokuhlanjwa kwi-aquarium?
Unako, kwaye enyanisweni kuyacetyiswa kakhulu kuba ngaloo ndlela akuyomfuneko ukuba uyitshintshe rhoqo emva kwesibini nangesithathu. Ekuphela kwento ekufuneka uyikhumbule kukuba awukwazi ukuhlamba i-greyhound (okanye, ngendlela, isiponji se-foamex) ngamanzi etephu, kuba oku akunakulinganisa ibhalansi yebhayiloji yamanzi etankini. Kungcono ukuba usebenzise amanzi e-aquarium ngokwawo ukuze uwahlambe kwaye ususe konke ukungcola abakuqokeleleyo.
Ngaba kungcono i-perlon okanye isiponji?
Nokuba yeyiphi okanye enye: inja kunye nesiponji kufuneka zihambe kunye, kuba ukuba ubeka enye ngokwahlukeneyo, umsebenzi wayo awuzukuchaneka. Ke, ukuba sibeka kuphela i-perlon, ubumdaka emanzini buya kuvalela isihluzo kwangoko kwaye abuyi kuba nakho ukufunxa yonke into, ewe, eya kuba nefuthe kumgangatho kunye nokubonakala elubala kwamanzi kwi-aquarium yakho.
Kunoko, ukuba sibeka isiponji kuphela, kuphela amasuntswana ashinyeneyo aya kuhluzwa, apho ezona zilungileyo ziya kuqhubeka zingcolisa amanzi. Kufana nokwenza umsebenzi isiqingatha, ke kubalulekile ukuba usebenzise okungenani isiponji kunye ne-perlon (kukwakhona abo basebenzisa izihluzi zebhayoloji ezinje ngeeseramiki okanye ubuhlalu, ezivumela iibacteria ukuba zilungiselelwe kwaye ziguqulwe zibe zizinto eziluncedo kuwe Kodwa esi sesinye isihloko esiza kuthetha ngaso kwesinye isihlandlo).
Isiponji, ngasendleleni, kufuneka senziwe nge-foamex. Ayisiyonto ebiza kakhulu kwaye inokuhlanjwa, njenge-perlon yasemanzini, ke iya kuhlala ixesha elide. Lo mbandela unokuhambelana ngokugqibeleleyo kunye ne-porosity yokwenza lo msebenzi wokucoca kwi-aquarium.
Kwaye perlon okanye umqhaphu?
Nangona ekuboneni kokuqala ziyafana, Zizinto ezahlukileyo kakhulu, kuba i-perlon, eyenziweyo, ibamba ngcono kakhulu, ihlala ixesha elide kwaye ingawiNgokungafaniyo nomqhaphu, onokwenza ukuba amanzi akho abukeke njengeempungutye.
Ukuba nantoni na awunakufumana nja, unezisombululo ezibini ezinokubakho: Okokuqala, sebenzisa umqhaphu kwaye ujonge yonke imihla ukucoca ukuvala kunye nokudodobala. Okwesibini, sebenzisa ukuzaliswa komqamelo okwenziweyo, okubizwa ngokuba yi-wadding. Le nto ifana kakhulu ne-perlon. Ukuba yinto yokwenziwa, ayiwi ngaphandle, kwaye nokuba ayisebenzi kakuhle, inokukukhupha kwindawo exineneyo.
Nangona kunjalo, siyanyanzelisa: Kungcono ungakhangeli abambeleyo kwigreyhound, Izinto esele zitshiphu kwaye zizalisekisa umsebenzi wazo ngokugqibeleleyo.
Isiphelo: sebenzisa i-greyhound kwi-aquarium, ewe okanye hayi?
I-perlon kulula ukuyisebenzisa, ayifuni kulondolozo olugqithisileyo (nangona oko kuxhomekeke kwinto nganye kunye ne-aquarium yakho, kunjalo), kuyabiza kwaye kulula ukuyicoca. Kuya kufuneka uyidibanise nesiponji ukuze ukucoca kwayo kuchaneke, kwaye uqiniseke ukuba ayiyomveliso yomqhaphu ukuze ingagqumi okanye yehle.
Ngamafutshane, le nto inokuba ngumlingani omkhulu ukugcina i-aquarium yakho icocekile nakwezona nxalenye zincinci.
Apho ukuthenga perlon zitshiphu
Kukho iindawo ezimbini ezintle apho unako khona thenga esona sitshiphu sinexabiso eliphezulu kwi-aquarium yakho.
Okokuqala, kwi Amazon Uya kufumana iimveliso ezininzi kunye namaxabiso ahlukeneyo e-greyhound ye-aquariums. Kuxhomekeka kwinani olifunayo (nangona kunganyanzelekanga ukuba uthenge okuninzi ukuze usebenze, kuba, njengoko besitshilo, inokucocwa kwaye ihlale ixesha elide), ixabiso lijikeleze i- € 3 nge-100 g. Kwaye ukuba unayo iNkulumbuso, iya kukugodusa ngaphandle kwexesha.
Okwesibini, ungaya iivenkile ezikhethekileyo zezilwanyana ezinje ngeKiwoko. Into emnandi malunga noku kukuba, ukuba banenguqulelo ebonakalayo, ungaya buqu uze ubone imveliso uyithenge kanye apho. Icala elisezantsi lelokuba, ukuze ungahlawuli ukuhambisa ngenqanawa, kwiimeko ezininzi kuya kufuneka ubeke iodolo encinci. Ixabiso lifana kakhulu neAmazon, malunga ne- € 2,5 nge-100 g yale mveliso.
I-aquarium greyhound yi Isihluzo esinceda ukugcina ikristale yamanzi icacile ukubulela kumandla ayo aphezulu okucoca, nangona ingenguye wonke umntu onamava afanayo. Khawusixelele, ibinjani eyakho? Ucinga ntoni ngale nto? Uyihluza njani i-aquarium yakho?
Imithombo: Umbala wamanzi, Intlanzi ye-Aquarium
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » I-Perlon ye-aquarium